Konke malunga neTwich Prime 2021 ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Konke malunga ne-Twich Prime 2021
Meyi 1, 2021 0 IiCententarios 388
Twich Inkulumbuso liqonga elinikezela ngenkonzo yenyanga yobhaliso ngejelo Ngokubini, kwaye iintlawulo zihlawulwa rhoqo ngenyanga. Kodwa Twich Inkulumbuso Ikuvumela ukuba ubhalise rhoqo ngenyanga ngejelo layo.
Uyifumana njani iNkulumbuso yasimahla
Kuya kufuneka wenze amanyathelo ama-4 ukufumana i-Twich Prime yasimahla.
Kwiqhosha elithi "Bhalisa”Cinezela uze ukhethe ijelo olithandayo.
Jonga ukhetho "Bhalisa simahla".
Xa uthenga ukuthenga kwaye uvuselele iphepha, uya kubona ibhanile ephezulu kwincoko yeli jelo.
Cofa kwiqhosha "Yabelana" Yebhanile.
Uyifumana njani inkululeko yeTwich Prime kwiAmazon
Khangela uvavanyo lwasimahla kwiintsuku ezingama-30, kwaye ukuba kufanelekile ukuhlawulela ubulungu.
Sebenzisa amakhadi ezipho eAmazon
Ungalahli umvuzo wakho wekhadi letyala.
Guqula isicwangciso sefowuni esiphathwayo.
Yabelana ngeakhawunti kunye neKhaya leAmazon.
Ungabhalisa njani kwiTwitch Prime kwiselfowuni?
Ukurhumela ngomnxeba ophathwayo kulula.
Pulsa iqhosha Bhalisaxa ijelo lisasaza ngqo.
Cinezela isidlali sevidiyo
Xa iqhosha lokuBhalisa liyafumaneka
Bhalisa en Android kulula kakhulu. Ukufikelela kwiqhosha Bhalisa Xa ijelo lisasaza ngqo, cofa ividiyo player. Iqhosha Bhalisa Ikwafumaneka nakwiphepha lephrofayili kwisitishi ngasinye, kwaye unokufikelela kuyo nokuba uqhagamshele okanye awuxhunyiwe.
Ngaba Twich prime simahla Injongo yayo kukuba ababhalisile banokuxhasa ngemali nesisila kubantu abasasaza kwisitishi sakho.
Iindlela zokufumana i-Twich Prime mahala.
Twich Inkulumbuso idlula Amazon Prime. Ayikuvumeli ukuba uthenge Ngokubini ngokuzimeleyo, kunyanzelekile ukuba ube ngumsebenzisi oyintloko weAmazon, ukuze ufumane ingxelo yasimahla ye Twich Inkulumbuso.
Njengoko kukhankanyiwe kukho ifayile ye- Ityala leentsuku ezili-30 zasimahla kwaye ungayifumana kwamanye amaqonga okusasaza, njenge Inkulumbuso yeAmazon, iHBO UK kunye neNetflix, Le yeyabasebenzisi abatsha kuphela.
Twich Prime simahla, ukuze kuzuze wena, yenza le nyathelo ukuze abantu baziswe ngomxholo weqonga emva koko babhatalele Inkokhelo yeNkulumbuso. Ikunika ithuba lokusebenzisa iNkulumbuso simahla ngokungapheliyo, ngokuvula iakhawunti ukusuka Amazon, yenza inyanga yasimahla ye Amazon Prime kwaye urhoxise umrhumo ngaphambi komhla obekiweyo.
Xa usebenza Inkulumbuso yasimahla yeAmazon, awuyi kufumana ntlawulo kwikhadi lakho letyala. Enye indlela yokukhetha isilingo sasimahla kukuvula iakhawunti entsha Amazon Ngu imeyile, phawula uvavanyo lwasimahla kwaye usebenzise indlela eyahlukileyo yokuhlawula.
Ungazikhupha njani kwi-Twich Prime mahala
Ukuba awufuni ityala kwikhadi lakho letyalaPhambi kokuba kuphele uvavanyo lweentsuku ezingama-30 zasimahla, kuya kufuneka ungabhalisi kwiAmazon Prime.
Ukurhoxisa iakhawunti yakho, yenza la manyathelo alandelayo.
Yiya kwiakhawunti yakho Amazon Prime Video
Cofa ku "Lawula ubhaliso lwam"
Kufuneka ukhethe "Sukuhlaziya"
Kwaye ucofe ku Khubaza uhlaziyo oluzenzekelayo
1 Uyifumana njani iNkulumbuso yasimahla
2 Uyifumana njani inkululeko yeTwich Prime kwiAmazon
3 Ungabhalisa njani kwiTwitch Prime kwiselfowuni?
4 Iindlela zokufumana i-Twich Prime mahala.
5 Ungazikhupha njani kwi-Twich Prime mahala
Uyifumana njani inkulumbuso yasimahla?
Uyifumana njani iTwitch Prime?